Telefon Ip Server Voip mahwindo Server configurado
Santa Cruz the Sierra
game Software VoIPSwitch
Y Mahwindo Server with plataforma softswitch Telefoon Rinozvikudza ip.
Voipswitch ane zvose zvokushandisa zvaunoda kuti Internet runhare. Rine ehupfumi kuderedza Administrator, switchboards uye softphones yokukurukura. Saka Softswitch rinopa paIndaneti ruzivo foni. Zviri Zvaifadza papuratifomu.
Your Own Business Rinozvikudza ip nvidia zvino zvinogoneka yakakwana Server chikuva pamusika uye. ServerVoIP zvinoita -fully garatizado- kubata nayo pasina neunyanzvi, kutanga kubvumira kushanda kubva kunyaradzwa musha wako uye kuti mari pakarepo.
Kupfuura kwakakwana uye dzichipfekeka Software nokuda VoIP nvidia.
It ServerVoip vane kupfuura mamiriro shanduro Software yakaiswa pa Windows Server VoipSwitch 2008, uye mune dzimwe servers (yakakwirira magumo) Windows Server 2012.
Kuziva unhu >>
Advanced utariri marongedzero
IP nvidia bhizimisi.
The SoftSwitch kuchikuva chakagadzirirwa kushandisa estña, kushandisa uye kuongorora zvokushandisa zvako pasina matambudziko kana zvekushandisa ruzivo.
- vatengi kirasi
- pinda Suppliers
- Distributors uye Resellers fomu
Updated midziyo yako
Control Rates & Inokumbira
Achishevedza Cards Y Callshop
Nezvikumbaridzo uye VsPortal
kubhadhara / Online kubhadhara
Chat in VoIP chinja
uchishandisa VoipSwitch kuchikuva ari pose Mupi maminitsi vatengi yenyu kudana landlines uye maserura pose munyika, nezvakanakisisa prices kana mitengo zvaunoda kuti utariri.
Business Your riwanikwe nyika pamwe
Windows Server kuchikuva configured IP nvidia
Sarudzai Server VoIP rwaunoda kuti Phone Your.
kubva 50 hereinafter inzwi channel kubva $ 150.00 zvamadhora mwedzi, Pane zvose-in-mumwe zvose.
dzidza More >
"We anopa zvakanakisisa VoIP servers pamwe VoipSwitch nokuti IP nvidia kambani kubva 2008 pakona rimwe nerimwe munyika"
FREE Chapter 10 uye Discover
How mari yakawanda unokwanisa mari ne kambani foni yako?
Kugadzira yenyu Server VoipSwitch nomazvo uchida kuti vatengi zvenyu, bhizimisi uye Distributors.
Videotutoriales ari kukurukurwa HD Platform (HD) kudzidza zvakawanda pamusoro IP nvidia (VoIP).
chikamu Videos >
Wana mhinduro pamusoro wako Voip kambani. Taura kuti mubatsiri kubvisa zvinovanetsa.
VoipSwitch nokuti Internet nvidia basa modules kuti panodana landlines dzeserura munyika.
Terms uye Conditions Política de Privacidad Anti SPAM PolicyDMCA Disclaimer FTC statement dzosera Policy
ServerVoIP Zviri basa ServiMatango.com